Madaxwayne Goboleedyadda Somalia oo ku sugan Kismaayo, Muxuu ka dhigan yahay Isu Imaatinkoodu,? – Hornafrik Media Network
Madaxwayne Goboleedyadda Somalia oo ku sugan Kismaayo, Muxuu ka dhigan yahay Isu Imaatinkoodu,?
Magaaladda Kismaayo ee Xarunta Jubbaland waxaa ku sugan Madaxwayne Goboleedyadda Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabelle, Puntland, iyo Madaxwaynaha Martidda loo yahay ee Jubbaland.
Shirkan oo gogoshiisa uu dhigay Madaxwaynaha Jubbaland, Axmad Madoobe ayaa lagu sheegay in Ajandaha looga hadlayo uu yahay Wadatashi u dhaxeeya Dowlad Goboleedyadda, iyo in la dhameeyo Muranka soo kala dhex galay Dowlad Goboleedyadda iyo Dowladda Dhexe, balse Sheekaddu sidaas way ka duwan tahay waxayna Dowladda Dhexe u aragtaa inuu yahay Shir qatar ku ah Qaranimadda Somalia, inkastoo ay ku guul daraysatay isku dayo ay doonaysay inay ku baajiso.
Madaxwaynaha Galmudug, Axmad Ducaale Geelle Xaaf oo Xildhibaano ka tirsan Galmudug ay sheegteen inay Xilka ka qaadeen, balse uu iska diiday ayaa ka soo dhex muuqday Maanta Kismaayo, isagoo waliba loo sameeyay Soo Dhawayn aan horay uga dhicin Kismaayo, taasoo u muuqata Dhoolatus Siyaasadeed oo ay samaynayaan Madaxwayne Goboleedyaddu, maadaama riditaanka Xaaf ay Dowladda dhexe door ka qaadanaysay. Waxay kaloo ahayd Fariin Siyaasadeed oo loo dirayay Villa Somalia.
Madaxwaynaha Hirshabelle, Waare oo ku mowqif ah Dowladda dhexe ayeey ku qasbeen Maamuladda kale inuu ka soo qayb galo Shirka, kuna mowqif noqdo, taasoo ka dhigan inuu ka xarig furtay Muqdisho. Waana tallaabo kale oo muujinaysa in Dowladda Dhexe ee Fadhigeedu yahay Muqdisho ay waysay Dowladihii Xubnaha ka ahaa.
Madaxwaynaha Koonfur Galbeed, Shariif Xasan oo la aaminsan yahay inuu qayb ku lahaa Hindisaha in Shir Noocan ah uu qabsoomo ayaa isugu habeen ka hor ku sii hoyday Kismaayo, Waxayna illaa iyo xalay hoos iskugu dhigayeen isaga iyo Axmad Madoobe Shaxda ay ciyaarayaan iyo Natiijadda ka dhalan karta.
Shariif Xasan ayaa la rumaysan yahay inuu ku xigi lahaa Xaaf haddii ay ku guulaysan lahaayeen Dowladda Dhexe inay meesha ka saaraan, taasoo ah Sabab kale oo soo dadajisay inay midoobaan Madaxwayne Goboleedyaddu. Waxaana Shariif Xasan oo Saamayn ku leh Siyaasadda Gudaha Somalia uu u muuqdaa inuu ciyaarayo Shax lagu difaaco Galmudug, si aysan Xasaradda Siyaasadeed ee lala damacsan yahay Dowlad Goboleedyaddu halkaasi u soo dhaafin.
C/wali Gaasi-Madaxwaynaha Puntland oo laga hor keenay Ku Xigeenkiisa waxa uu isna soo gaaray Kismaayo, Waxaana uu cad inaan isna la dhaafayn haddii aan la adkayn Isbahaysiga Dowlad Goboleedyadda, Waxaana Gaas iyo Maamulkiisa oo aan Siyaasad ahaanba oggolayn Galmudug ay hadda si cad uga hor yimaadeen in Xaaf Xukunka laga tuuro, taasoo muujinaysa in Xaaladda jirtaa ay abuurtay Isbahaysiyo Isku Dan ah oo illaalashanaya Jiritaankooda.
Madaxwaynaha Jubbaland, Axmad Madoobe oo dhigay Gogosha Shirka Kismaayo waxa uu laftigiisu qabaa tuhun ah inaan la dhaafi doonin haddii lagu guulaysto in la badalo Madaxda kale ee Maamul Goboleedyadda, Waxaana uu doonayaa inay yeeshaan Isbahaysi mid ah si aan marba mid gooni loola dagaalamin, Isagoona ku dadaalaya inay yeeshaan Cudud Midaysan oo ay uga hortagayaan Qalalaasaha laga dhex abuurayo Maamuladooda.
Maamulka Somali Land oo sheegta inuu ka go’ay Soomaaliya inteeda kale ayaan Shirka qayb ka ahayn, Waxayna u arkaan inaysan waxba ka qusayn waxa ka socda Soomaaliya inteeda kale oo ay iyagu yihiin Dal ka go’ay Soomaaliya, balse wali ma haystaan ma Aqoonsi.
Beesha Caalamka oo taageerta Somalia waxay la dhacsan yihiin Isu Imaatanka Madaxda Dowlad Goboleedyadda, balse illaa iyo hadda Mowqifkooda ma aysan cadayn, Waxayna Xog ku heshay HornAfrik in Shirka marka uu dhamaado ay soo saari doonaan Warmurtiyeed ay ku taageeri doonaan Go’aanadda ka soo baxa Shirkaasi.
Ugu Dambayn Shirka Kismaayo Waa Fariin Cad oo muujinaysa inay kala furteen Dowlad Dhexe iyo Dowladaha Xubnaha ka ah, Isu Imaatinkoodana waa Isbahaysi Siyaasadeed oo ay ku muujinayaan Cududooda, Waxaana ay Gabagabadda Shirkooda ku cambaarayn doonaan Faragalinta lagu hayo Dowlad Goboleedyadda.
Xuquuqda waxay u gaar tahay HornAfrik.